यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ ? हेर्नुस् यसबाट बच्ने घरेलु उपाय !::Nepalese News Portal
यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ ? हेर्नुस् यसबाट बच्ने घरेलु उपाय !
यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रीयहरु आँखा, कान आदिले सन्तुलित ढंगबाट आ–आफ्नो कार्य गर्न नसक्दा मोसन सिकनेस अर्थात यात्राजन्य वान्ता उत्पन्न हुन्छ । मोसन सिकनेस पनि व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ । कसैलाई सवारी साधन बस, ट्याक्सी, हवाईजहाज चढेको केही मिनेटमै सुरु हुन्छ भने कसैलाई घन्टौं पछि । मोसन सिकनेस भएमा यात्रा साह्रै कष्टकर हुन्छ । अतः आफ्नो यात्रा सुखदायी र रमाईलो बनाउनका लागि हाम्रै घर भान्सामा प्रयोग हुने केही प्रभावकारी घरेलु उपाय र औषधीय गुणयुक्त जडिबुटीको बारेमा जानकारी लिई राखौं ।
१) जेठीमधु : यो मधुर र स्निग्ध गुणयुक्त हुने भएकोले आमाशयको अम्लता कम गर्दछ साथै आमाशयको वायुलाई पनि कम गर्दछ । अतः यात्रा गर्दा जेठीमधुका टुक्राहरु मुखमा राखेर चुसीरहनु पर्दछ ।
२) ल्वाङ्ग : ल्वाङ्ग मुखमा राखेर चुसीरहँदा पनि वान्ता हुँदैन ।
३) जामुन : जामुनको फल तथा यसका पातहरुमा वान्ता रोक्न सक्ने औषधीय गुण हुन्छ । अतः जामुन पत्रको रस निकालेर यात्रा गर्नुपूर्व पिउने वा यात्राको वीच–वीचमा अलि–अलि रस पिउँदा पनि वान्ता हुँदैन । साथै जामुनको फल नै फलफुलका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
४) आँप : काँचो आँपले खानामा रुची लगाउँछ, खाना पचाउन सहयोग गर्दछ । त्यही आँपको पातले वान्ता रोक्ने काम गर्दछ । यसर्थ यात्रा गर्दा आँपको पातको रस निकालेर वीच वीचमा पिउने गर्नुपर्दछ ।
५) सौंफ : सौंफले पनि वान्ता रोक्ने काम गर्दछ । यात्राका क्रममा मुखमा सौंफ राखेर चपाईरहँदा पनि वान्ता हुँदैन ।
६) अदुवा : रुघा खोकी, अरुची आदिमा प्रयोग गरिने तथा दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने अदुवामा वान्ता रोक्ने औषधीय गुण हुन्छ । अतः यात्राका क्रममा अदुवाका टुक्रा मुखमा राखेर चुसीरहँदा पनि मोसन सिकनेस कम हुन्छ । यसैगरी फलफुलका रुपमा प्रयोग हुने दाडिम (अमिलो अनार), बयर, बिमिरो आदि यात्राका क्रममा पटक–पटक खाँदा पनि मोसन सिकनेस कम गर्न सकिन्छ ।
अथवा माथि भनिएका मध्ये मौसम अनुसार काँचो आँप वा दाडिम जे उपलब्ध हुन्छ त्यही लिई त्यसको जुस बनाउने र उक्त जुसमा पुदिना, अदुवा, ल्वाङ्ग मिसाएर अलिकति नुन र सौंफको पाउडर पनि राखी यात्राका क्रममा पटक–पटक पानीका रुपमा प्रयोग गर्दा पनि मोसन सिकनेसलाई कम गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्यखबरबाट
के हो डेंगु ? यस्ता छन् यसका लक्षण र बच्ने उपाय
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावलीद्वारा आफ्नै शरीर दान
श्रीमतीले शारीरिक सम्पर्क गर्न नदिएको झोकमा युवकले काटे आफ्नै लिङ्ग
नुवाकोटको गोगनेमा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
सेक्सी नर्सका कारण अस्पतालमा उपचार गराउन आउने पुरुषको भिड
नेपालले तरकारीमा प्रतिवन्ध लगाएपछि भारतमा हङ्गामा
नेकपाले तोक्यो महानगर कमिटीको नेतृत्व (नामसहित)
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले महानगर स्तरीय कमिटिको नेतृत्व...
बिष्णुको ‘झुम्की’ बजारमा
काठमाडौँ । गायक बिष्णु भट्टको स्वर र संगीत रहेको देउडामा आधारित...
सी जिनपिङ विचारधारा : पश्चिमा व्यवस्थाको विकल्प
काठमाडौँ । नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको विचारधाराबारे बहस सुरु भएको...
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने...
पूर्वकमाण्डर प्रतिक्षा सहायक रथीमा बढुवा
काठमाडौं । तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका कमान्डर यमबहादुर अधिकारी ‘प्रतिक्षा’ नेपाली सेनाको...
दसैंका लागि नयाँ नोट असोज १० गतेदेखि
काठमाडौँ । दसैं र तिहारका लागि नयाँ नोट असोज १० गतेदेखि...
सरकार नतिजामुखी काम गर्न कटिवद्ध छ : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान...
नागरिकता विधेयकमा कांग्रेसको असहमति
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नागरिकता सम्बन्धि विधेयकमा लिखित...
राष्ट्रपतिको विरोध हुने आशंकामा पूर्व डीआईजीसहित १५ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले बसन्तपुर क्षेत्रबाट १५ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।...
दशैँअघि सार्वजनिक सवारीको भाडा नबढ्ने
काठमाडौं । सरकारले दशैँअघि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा नबढाउने भएको छ...
© 2019 NayaPrabaha All right reserved Site By : SobizTrend Technology